स्वास्थ्य – Page 12 – shubhabihani
Home / स्वास्थ्य (page 12)
नियमित सेक्सले मृगौलाको पत्थरी निको हुने !
टर्कीमा हालै भएको एक अध्ययनको निष्कर्षले विशेषज्ञहरु नै आश्चर्यमा परेका छन् । उक्त अनुसन्धान अनुसार हप्तामा कम्तीमा पनि ३,४ पटक सेक्स गर्ने मानिसको मृगौलाको पत्थरी स्वतः आफ्नै हट्दछ र पत्थरी रोग निको हुन्छ ।
मुत्र विशेषज्ञहरुले समेत यो निष्कर्षमा सहमत हुँदै सम्भोगका बेला मानिसको सरीरमा उत्सर्जन हुने एक महत्वपूर्ण यौगिक तथा रक्तसंचार र मुटुको स्वास्थ्यमा आउने सुधारले मृगौलाका साना तिना पत्थरीलाई आफै बाहिर निकाल्नका लागि सहयोग गर्दछ ।
मुत्र विशेषज्ञका अनुसार सम्भोगका दौरान मानिसको सरीरमा नाइट्रिक अक्साइडको निर्माण हुन्छ र उत्तेजनाको अवस्थामा मुत्रनलीबाट बाहिर निस्किन्छ, जुन निकै आनन्ददायक हुन्छ । साथै यसले मुत्रनली तथा मृगौलाका स साना छान्ने नलीहरुको मांशपेशीलाई मजबुत बनाउने काम पनि गर्छ ।
टर्कीको अंकारास्थित क्लिनिक अफ अंकारा ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च हस्पिटलका शोधकर्ताहरुले शोधमा संलग्न ७५ जना मानिसलाई ३ समूहमा विभाजन गरेका थिए ।
त्यसक्रममा मृगौलामा ५ मिलिमिटर भनदा सानो आकारका पत्थरी भएका मध्ये ८३ प्रतिशत मानिसको नियमित सेक्सका कारण मृगौलाको पत्थरी आफै बाहिर निस्किएर हटेको पाइयो ।
डाक्टरहरुले नियमित सम्भोगले मृगौलाकेा पत्थरी हटाउनमा सहयोग गर्ने सम्भावना रहेपनि यसलाई पुष्टि गर्नका लागि अझै धेरै अध्ययनको आवश्यकता रहेको भन्दै पत्थरीका बिरामीलाई उपचार छाडेर तत्काल सम्भोग तर्फ लाग्न सल्लाह दिन नसकिने बताए ।
पत्थरीका बिरामीले डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि सेवन गर्ने, पर्याप्त पानी पिउने तथा अल्कोहलको सेवन नगर्ने जस्ता उपाय अपनाउनु पर्ने सुझाव डाक्टरहरुको रहेको छ ।
कति वटा सम्म केरा खान हुन्छ?
केरा धेरै खाँदा पेट दुख्छ, पेट बटारिन्छ अनि आन्द्रामा समस्या आउँछ, धेरै केरा एकै चोटी खान हुन्न ?
यस्तो तपाइले पनि सुन्नु भएकै होला। साँचो के हो?
केरा संसारका अधिकांश मानिसले मन पराउने फलमा पर्छ। भिटामिन अनि मिनरल्सको अधिक मात्रा केरामा पाइन्छ। यस्तो फलदायी फल त शरिरको लागि राम्रो हुनु पर्ने हैन र? तर किन केरा धेरै खादा राम्रो हुन्न भन्छन् त?
केरामा पोटासियम पनि पाइन्छ। बढी केरा खाँदा शरिरमा पोटासियमको खतरनाक स्तरसम्म पुग्छ। यो पोटासियम कसरी खतरनाक हुन्छ?
पोटासले कोषहरुलाई सहि ढंगले संञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ। प्रत्येक कोषमा पाइने पोटास बाँच्नको लागि निकै महत्वपुर्ण हुन्छ। यसले मुटुको गतिलाई पनि स्थिर राख्न मद्धत गर्छ। साथै रगतमा हुने सुगर र रक्तचापलाइनै नियन्त्रण गर्न निकै सहयोगी हुन्छ पोटास।
के हुन्छ खतरा?
यदि शरीरमा पोटाशियमको स्तर धेरै बढे वा निकै कम भए मुटुको चालमा अनियमितता आउँछ, साथै पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने पनि हुन जान्छ।
अमेरिकामा पोटासियम क्लोराइडलाई मृत्युदंण्ड दिने समयमा मानिसमा प्रयोग गरिन्छ, जसले मुटुको चालमा अनियमितता ल्याइ ज्यान जानेसम्म गराउँछ।
केरामा भएको पोटासियमको मात्रा हेर्नेहो भने दैनिक करिब ४०० केरा खाँदा पनि मर्ने सम्भावना कमै हुन्छ। ४०० केरा, ६ हैन। ४००-५०० त अन्य फल खाए पनि पेटले धान्न नसकेर समस्या भने आउनसक्छ।
केरा स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक फल हो। केरा धेरै खाए बिरामी भइन्छ भन्ने सावित गर्ने कुनै आधार छैन। अत्याधिक धेरै त पानीले पनि हानी गर्छ।
ब्रिटेनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको अनुसार एक वयस्कलाई दैनिक ३५०० मिलीग्राम सम्म पोटासको आवश्यकता पर्छ।
एउटा औसत केराको तौल यदि १२५ ग्रामसम्म हुन्छ भने त्यसमा करिब ४५० मिलीग्राम सम्म पोटासशियम पाइने गर्छ।
यसरी हेर्दा एक स्वस्थ व्यक्तिले साढे सात केरा खाए पोटासियमको स्तर बढ्ने देखिन्छ। तर यो बढ्ने बित्तिकै खतरनाक नै भइहाल्ने भन्ने होइन। जसको दैनिक भोजनमा पोटासियमको मात्रा बढी छ उसले थौरै ध्यान पुर्याउदा राम्रो।
के छ केरा को फाइदाः
दिमागमा सेरोटोनिनको मात्रा बढाउन केरामा पाइने ‘ट्रिपटोफान’ जिम्मेवार हुन्छ। सेरोटिननले दिमागको खुसी हुने न्युरोट्रान्समिटरलाई सक्रिय गर्छ।
रगतमा हुने सुगर लाई नियन्त्रण गर्छ।
पिसाबसंग क्ल्यासियम बाहिर जाने सम्भावना कम गर्छ जसले शरीरको हड्डी बलियो बनाउन मद्धत गर्छ।
तौल घटाउन मद्धत गर्छ, साथै स्नायु प्रणाली मजबुद बनाउँछ।
रक्तचाप लम गर्न मद्धत जसले हृदयघातको सम्भाबना मा कमी ल्याउँछ।
गाईघाट (उदयपुर), ९ कात्तिक । चिसो बढ्न थालेपछि उदयपुरको विभिन्न स्थानमा टाइफाइड तथा कमलपित्तको प्रकोप बढेको छ । चिसो बढेसँगै जिल्लाको मध्यपहाडी र पूर्वी क्षेत्रमा टाइफाइड र कमलपित्तको प्रकोप सुरु भएको हो । रामपुर ठोक्सिला तथा बबला र बसाहा क्षेत्रमा ठूला उमेरका मानिसमा टाइफाइडले सताउन थालेको छ भने साना बालबालिकामा कमलपित्त देखापर्न थालेको स्थानीय बताउँछन् ।
सुरुमा अनियमित ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने र बिरामी बिस्तारै सिकिस्त हुने गरेको रामपुर–९ शिखरमणिका गोपाल खत्रीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै रामपुर बबला तथा सुन्दपुर क्षेत्रमा अधिकांश बालबालिकामा कमलपित्तको प्रकोप बढेको स्थानीयबासी विष्णुदेव चौधरीले बताउनुभयो ।
अहिले दैनिक ५० जना टाइफाइड र कमलपित्तका बिरामी उपचारका लागि अस्पतालमा आउने गरेको जिल्ला अस्पतालले बताएको छ ।
चिसो मौसम र प्रदुषित पानीका कारण सो प्रकोप देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ ।
यसमा सहभागी हुनेहरु यसलाई ‘एक्सट्रिम वेकअप कल’ भन्छन्। यसमा धेरै किसिमका अभ्यासहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि सहभागीहरुले दिनभर ऊर्जाशील महसुस गर्ने गर्दछन् र उत्पादनशील काम भएकोमा खुसी हुने गरेका छन्।
डेब्रेकरका सहनिर्माता आन्द्रे हर्ड भन्छन्, ‘यसको लक्ष्य दिनको रुटिनलाई उल्टो पारिदिनु हो । दिनभरिको व्यस्तता र बैठकहरुभन्दा पहिले केही मोजमज्जा र ऊर्जा अनुभव गर्नु नै यसको उद्देश्य हो।’
यसरी अमेरिकामा पनि इन्डोर साइक्लिङ फिटनेस चेन ‘सोलसाइकल’ –आत्माको चक्र) कम्पनीले पाएको सफलताका कारण गएको जुलाईदेखि सेयर जारी गरेको छ। यो कम्पनीको उद्देश्य नै शरीर, दिमाग र आत्मालाई सहयोग गर्नु रहेको बताइएको छ । यसको वेबसाइटका अनुसार राम्रा प्रशिक्षक, कम उज्यालो, मनमोहक ठाउँ र संगीतमय वातावरणमा रमाएर मानिसले आफूलाई सशक्त अनुभव गर्न सक्छन्।
यस्ता व्यस्तहरुलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको एउटा स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटमा डाउनलोड गर्न सकिने एप तयार पारिएको छ । यो एपलाई हेडस्पेस भनिन्छ र यसका संस्थापक हुन्, एन्डी पुड्डीकोम्ब हुन् । एन्डी भन्छन्, ‘मजस्तो पाँचै बजे उठ्न सम्भव नहुनेहरुका लागि यो एप निकै प्रभावकारी हुन्छ ।’
‘ध्यान गर्नु भनेको कठिन काम हो र यसका लागि शान्त ठाउँ चाहिन्छ भन्ने भ्रम छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो अनुभवका आधारमा के भन्न सक्छु भने रेलमा होस्, बसमा या व्यस्त एयरपोर्टमा पनि घरैमा जस्तो ध्यान गर्न सकिन्छ ।’
एन्डी भन्छन्, ‘तपाईंलाई राति राम्रोसँग निद्रा लागेन भने पनि काम सुरु गर्नुअघि मज्जाले केही मिनेट ध्यान गर्नुभयो भने तपाईंलाई ताजा बनाइदिन्छ ।’
दैनिक ध्यान गर्नाले दिमाग शान्त त हुन्छ नै यो एपका माध्यमले गरिने कतिपय सेसनको सहयोगले काम गर्ने क्षमतामा उच्च वृद्धि हुने उनको दाबी छ । ‘यसले तपाईंको ध्यान र एकाग्रता उच्चस्तरको वृद्धि हुन्छ,’ एन्डी भन्छन् ।
लस एन्जल्सस्थित क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका मस्तिष्क अनुसन्धाता डा. फ्लोरियन कुर्थ भन्छन्, ‘जो व्यक्ति आध्यात्म वा ध्यान गर्छन् तिनले एकाग्रता, राम्रो स्मरणशक्ति, तिनको बोलीचाली र काममा निकै ठूलो फाइदा पाइरहेका छन् ।’
मस्तिष्कको ‘रिसेट बटम’
कुर्थ भन्छन्, ‘दैनिक रुपमा ध्यान गर्नाले तपाईंको दैनिक गतिविधिमा कार्य कुशलता आश्चर्यजनक तरिकाले बढ्छ ।’
हेडस्पेस एपका संस्थापक एन्डी भन्छन्, ‘१०–१५ मिनेटसम्म ध्यान गर्नु भनेको तपाईंको मस्तिष्कको कम्प्युटर पुनः सञ्चालन गर्नुजस्तो हो । यसले तपाईंको काम गर्ने क्षमता अविश्वसनीय तरिकाले बढ्छ ।’
विश्वविद्यालयको ब्रेन म्यापिङ सेन्टरमा कुर्थले केही सहयोगीहरुका साथ लामो समयदेखि ध्यानले दिमागमा गर्ने असरका बारेमा अध्ययन गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘ध्यान गर्ने व्यक्तिले छदेखि आठ साताभित्रै मस्तिष्कमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्छ ।’
कुर्थ भन्छन्, ‘ध्यान गर्नेहरुले निकै आनन्द महसुस हुने बताउँछन् र वैज्ञानिक शोध र अध्ययनले देखाएको आँकडाले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गर्दछन् ।’
एन्डी भन्छन्, ‘लामो समयदेखि हामीले शरीरलाई महतव दिँदै आयौं तर अब हामीले मस्तिष्कलाई पनि ध्यान दिनु र त्यसको रेखदेख गर्नु आवश्यक भएको स्पष्ट भएको छ ।
स्तनमा सिलिकन राख्‍ने भनेको के हो? किन राख्छन महिलाहरु स्तनमा सिलिकन ?
स्तन साना भएकाले सिलिकन राखेर ठूला बनाउन सकिने उल्लेख गरिएका विज्ञापन पत्रिकामा पढ्न तथा रेडियोमा सुन्न पाइन्छ। स्तनमा सिलिकन राख्ने भनेको के हो? कुन उमेरका महिलाले स्तनमा सिलिकन राख्न सक्छन्? यो राखेपछि स्तन क्यान्सरको जोखिम हुन्छ कि हुँदैन? बच्चालाई स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन? सिलिकन राखेपछि के–के समस्या आउन सक्छन्?
डा. जसवन शाक्य
मेडिकल डाइरेक्टर, सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल
महिलाको सुन्दरतासँग जोडेर हेरिने भएकाले यसको साइजलाई लिएर महिलाहरू चिन्तित हुने गरेको पाइन्छ। स्तनको साइज यति नै राम्रो हो भन्ने मानक हुँदैन। विभिन्न देश र फरक–फरक सामाजिक परिवेशअनुसार कतै ठूला स्तन भएका महिलालाई आकर्षक मानिन्छ त कतै साना स्तन भएका महिलालाई सेक्सी मानिन्छ।
स्तनभित्र सिलिकन राखेर यसको साइज ठूलो देखाउने विधिलाई ‘ब्रेस्ट इम्प्लान्ट’ भनिन्छ। यो बिलकुलै कस्मेटिक कुरा हो। यसले बिग्रेको स्तनको साइजलाई सुन्दर देखाउन मद्दत गर्छ। संसारमा ब्रेस्ट इम्प्लान्ट सुरु भएको लामो समय भए पनि नेपालमा एक दशकअघिदेखि ब्रेस्ट इम्प्लान्ट गर्ने सर्जरी हुन थालेको हो। सिलिकन मानिसको शरीरभित्र ‘एड्जस्ट’ भएर बस्ने र कुनै पनि हानि नगर्ने विशेष प्रकारको रबर हो। यो राख्ने साह्रै कमलाई मात्र यसको एलर्जी हुने गर्छ।
ब्रेस्ट इम्प्लान्ट प्लास्टिक सर्जनले गर्छन्। ब्रेस्ट इम्प्लान्ट गर्दा बेहोस गरेर, स्तनको मुनिपट्टि पाँचदेखि छ सेन्टिमिटरको घाउ पारेर सिलिकन राख्ने गरिन्छ। जसले गर्दा काटेको घाउमा सानो दाग बस्छ। स्तन झुण्डिँदा छोपिने भएकाले यो दाग सजिलै देखिँदैन।
स्तनको आकारलाई कत्रो बनाउन चाहेको हो, त्यही साइजको सिलिकन स्तनभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। सय सीसीदेखि सुरु हुने सिलिकनको साइज ४ सय ५० सीसी वा त्योभन्दा माथि पनि हुनसक्छ। ४ सय ५० सीसी भनेको निकै ठूलो साइज हो। यो पोर्न फिल्ममा काम गर्ने कलाकारले मात्रै प्रयोग गर्छन्। नेपालमा सयदेखि २ सय ५० सीसी सम्मका सिलिकन स्तनभित्र राखेर साइज बढाउने गरिएको छ।
१८ वर्ष उमेर पुगेका किशोरीदेखि ४५ वर्ष उमेरसम्मका महिलाले ब्रेस्ट इम्प्लान्ट गर्न सक्छन्। ब्रेस्ट इम्प्लान्ट गरेपछि छ महिनासम्म धेरै शारीरिक अभ्यास, खेलकुद तथा डान्स गर्नु हुँदैन। उमेर ५० वर्ष पुगेपछि भने शरीरमा हुने परिवर्तनसँगै स्तनको छाला पनि चाउरिने तथा स्तन झोलिने कारणले गर्दा इम्प्लान्ट गरिएको सिलिकन निकाल्नुपर्ने हुन सक्छ।
इम्प्लान्ट गरिएको सिलिकन स्तनको तल्लो भागमा रहन्छ। स्तनको माथिल्लो भागमा बोसो, त्यसपछि मांसपेशी र त्यसभन्दा मुनि इम्प्लान्ट गरिएको सिलिकन बस्छ। इम्प्लान्ट गरिएको स्तनलाई पुरुषले सुमसुुम्याउँदा यौन उत्तेजना पहिलाजत्तिकै आउने र यसले दूध उत्पादनमा केही असर गर्दैन। बच्चालाई मज्जाले स्तनपान गराउन सकिन्छ। इम्प्लान्ट गरिएको सिलिकनले प्राकृतिक स्तनमा भएको मांसपेशी तथा बोसोलाई तलबाट धकेलेर पर्फेक्ट साइजमा देखाइदिने काम गर्छ।
ब्रेस्ट इम्प्लान्ट गर्ने अपरेसन निकै होशियारीपूर्वक गर्नुपर्छ। यो कालिगढले मूर्ति बनाउँदा ध्यान दिएजस्तै हो। इम्प्लान्ट गर्दा सिलिकन डल्लो पर्योै वा राखेको मिलेन भने यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ। इम्प्लान्ट गर्दा चिरेको घाउ पाक्न थाल्यो भने तुरुन्त सिलिकन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एक पटक राखेर निकालिसकेको सिलिकन पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ शरीरले राखेको सिलिकनलाई रिजेक्ट गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सिलिकन बसेको वरिपरिको भागको मांसपेशी कडा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सिलिकन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सिलिकन राखेकै कारण स्तन क्यान्सर भएको उदाहरण अहिलेसम्म पाइएको छैन। स्तन क्यान्सर स्तनमा सिलिकन राखेका वा नराखेका दुवै थरी महिलालाई हुने गरेको छ। तर, सिलिकन राखेकै कारण स्तन क्यान्सर भएको वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन सकेको छैन।
युरोप, अमेरिका र भारतमा स्तनमा सिलिकन भर्ने अपरेसन नेपालको तुलनामा निकै महँगो छ। एक पिस सिलिकनको नेपालमा ७० हजार रुपैयाँ पर्छ। नेपालमा दुई लाखमा हुने अपरेसनमा विदेशमा कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ।
चियाको ६ प्रकार, तपाई कुन चिया पिउनुहुन्छ ?
सबै चिया ‘क्यामेलिया सिनेसिस’ नामक चियाको बोटबाट तयार गरिन्छ। तर विश्वभरमा चियाको हजारौ प्रकार पाइन्छ। चियाको बोट ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ। कुन समयमा चियाको पात टिपिन्छ त्यसले पनि चियाको प्रकारमा फरकपन आउँछ। साथै चियाको पातबाट चियापत्ति बनाउने प्रक्रियाले चियाको गुणस्तर, प्रकार अनि स्वादमा फरकपन ल्याउँछ। यी प्रत्येक चियाको स्वास्थ्यमा आफैखालको प्रभाव हुन्छ। यहाँ केही बढी प्रयोगमा ल्याइने चियाको बारेमा चर्चा गरिएको छ।
सेतो चिया सबैभन्दा सुद्ध अनि कम प्रसोधन गरिएको चियामा पर्छ। यसको रंग हल्का हुन्छ अनि मन्द बासना हुन्छ। यो चिया स्वाद र प्राकृतिक मिठासको लागि चर्चित छ।
सबैभन्दा चर्चित चियामा पर्छ ग्रीन टी। विश्वमै हेर्ने हो भने एसियामा निकै पिइन्छ यो चिया। केही ग्रीन टीहरु फुल अनि फल संग मिश्रण गरि तयार पनि गरिएको हुन्छ, जसले यसको वासना निकै मिठो बनाउँछ।
यो चिया विशेष गरि चीनमा प्रचलिन छ। (oolong tea) चीनका रेस्टुरेन्टहरुमा बढी प्रयोग गरिन्छ।
हामीले सानै देखि पिउँदै हुर्केको चिया हो, ब्ल्याक टी। यो चिया अन्य भन्दा कडा स्वादको हुन्छ। दुध र चिनी मिसाएर पनि यसलाई पिउने गरिन्छ।
हर्बल टी मात्र यस्तो चियाहो जसमा ‘क्यामेलिया’ प्रजातीका विरुवाको पात प्रयोग हुदैन। हर्बल टी पनि तीन प्रकर को हुन्छ।
१ रोइबोस टी
२ मेट टी
३ हर्बल इन्फ्युजन
दक्षिण अफ्रिकामा पाइने विशेषखालको रातो विरुवाबाट यो चिया तयार गरिन्छ। यसलाई ‘रेड टी’ को नामले पनि चिनिन्छ। फरक स्वादमा पाइने यो चियाको स्वाद निकै मिठो मानिन्छ।
कफिको जस्तो स्वाद हुने भएकाले कफि मनपराउने मानिसले पनि यो चिया मनपराउने गर्छन्। अर्जेन्टीनामा पाइने विशेष जंगली विरुवाले यो चिया बन्छ। मिठो स्वाद अनि बास्नाको लागि यो चिया प्रख्यात छ।
चियाको बारेमा रोचक तथ्य
१ सबैभन्दा बढी पिइने पेयपदार्थको दोस्रो स्थानमा चिया पर्छ, पहिलोमा पानी।
२ चिया जति कम प्रसोधन गरिन्छ, त्यतिनै त्यसमा ‘एन्टीअक्सिडेन्ट’ बढी पाइन्छ। त्यसको मतलब ग्रीन टीमा ब्ल्याक टी भन्दा बढी एन्टीअक्सिडेन्ट पाइन्छ।
३ ब्ल्याक टीलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ। त्यसैले चीनले विश्वमा ब्ल्याक टी निकै बेच्न गरेको छ। जहाँ कि चीनमा ग्रीन टी पिउनेको संङ्ख्या बढी छ अनि विश्वमा ब्ल्याक टी पिउने बढी छन्।
दशैंमा मिठो खाँदै स्वस्थ खाने ११ टिप्स
चाडवाडका बेला मानिसहरुको मिठो खान रुचाउँछन् । फ्राइ खाना र मिठाईहरुको प्रयोग आत्याधिक हुने गर्दछ । अत्याधिक क्यालोरी हुने यस्ता परिकारको प्रयोगले मानिसको तौल बढ्नु स्वभाविक हो । घिउ, चिनी र दुध तथा खुवाजस्ता परिकार मिसाएर बनाइएका मिठाईका परिकारले क्यालोरी बढाउँछ । अहिले थुप्रै चकलेट तथा डाई फलफूलले पनि मानिसहरुको ध्यान खिच्ने गरेको छ । तर मानिसले चाडबाडमा जतिसूकै मिठो परिकार खाएपनि यसले मानिसको नियमित रुटिन बिगार्नु भने राम्रो होइन । त्यसैले चाडवाडमा साथिभाई, आफन्त तथा परिवारको आग्रहका बाबजुद ठिक्क खानका लागि केही चलाखीहरु अपनाउँदा राम्रो होला ।
१. सानो प्लेट लिनुहोस्
सानो प्लेटमा खान लिएको राम्रो , अस्वस्थ खानेकुरालाई कम गर्न सानै चम्चा, सानो ग्लास र सानो कचौराको प्रयोग गर्नुहोस् । यदी तपाईलाई सबै परिकार खान मन मनलाग्छ भने थोरै थोरै गरेको झिक्नुहोस् ।
२. नियन्त्रण राख्नुहोस्
चाडवाडमा खुसीयाली मनाउँदा सकेसम्म सबै थरिका परिकार खाएको राम्रो हुन्छ । तर नियन्त्रण कायम गरेर थोरै भन्दा थोरै खानु राम्रो हुन्छ । क्यालोरी धेरै हुने परिकार लिदाँ फलफूल खाएर त्यसलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस् । एउटा ठूलो कपको खिरमा ३०० देखी ५ सयसम्म क्यालोरी हुन्छ ।
३. ठिक्क खानुहोस्
कसैले आग्रह गर्दैमा खानुपर्छ भन्ने छैन् । यदी साथिभाई वा परिवारले कर गरेमा पनि उनीहरुको मान राख्न थोरै खानुहोस् । यदी मिठाई बढी आएको खण्डमा आफ्नो दैनिक रुटिनबाट अन्य क्यालोरी घटाउनुहोस् । चिया कम गर्नुहोस् र भातमा कमी कमी ल्याउनुहोस् । बरु त्यसको स्टटा रा्ेटी खान सक्नुहुन्छ ।
४. बदामको प्रयोग
मिठाईको बदलामा बदामको प्रयोग गर्नृहोस् । यसमा ६० देखी १ सयसम्मको क्यालोरी हुन्छ र यसले लामो समयसम्म भोक पनि लाग्दैन् ।
५. चिसो पेयबाट टाढा रहनुहोस्
चिसो पेय पर्दाथको प्रयोग कम गर्नुहोस् । यसले तपाईको तिर्खा मेटाएपनि चिनीको मात्राले असर गर्छ । अतिथीहरुलाई बरु नरिवलको पानी वा कागती पानी ट्क्रायउनुहोस् । फलफूलको जुस अर्को राम्रो विकल्प हुनसक्छ ।
६. मिठाईमध्ये स्वस्थ छान्नुहोस्
मिठाईका अनेक परिकारमध्ये स्वस्थ परिकारको बढी प्रयोग गर्नुहोस् । बजारमा पाइने मिठाईको प्रयोग कम गर्नुहोस् ।
७. खानअघि पानीको प्रयोग
कुनै पनि परिकार खानुअघि पर्याप्त पानी पिउनुहोस् । यस्तो गर्दा तपाईलाई धेरै खान मन लाग्दैन ।
८. बिस्तारै खानुहोस्
बिस्तारै खाँदा शरिरले पनि उत्तिकै सहज तरिकाले पचाउँछ । त्यस्तै खानको
स्वाद पनि थाहा हुन्छ ।
९. चिल्लोको प्रयोग कम गर्नुहोस्
खाना पकाउँदा तेलको प्रयोग कम गर्नुहोस् । दैनिक रुपमा प्रयोग गर्नेभन्दा बढी तेल प्रयोग गर्दा स्वास्थलाई राम्रो हुदैँन ।
१०. अभ्यासका लागि समय छुट्याउनुहोस्
चाडवाडमा पनि आफ्नो दैनिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुहोस् । अभ्यासले पेट तथा शरिरलाई सन्तुलित राख्दछ ।
११. फ्याटजन्य पर्दाथको प्रयोग कम गर्नुहोस्
कम फ्याट भएको दुध तथा अन्य डेरी उत्पादनको प्रयोग गर्नुहोस् । चिनी, मह लगायतका पर्दाथ कम प्रयोग गर्नुहोस् ।
पोलेको मासुले क्यान्सर होला है
चितवन : नेपालीले दसैँमा बढी मासु खाने गर्छन् । मासुका विभिन्न परिकार बनाउने क्रममा धेरै पोलेको र भुटेको मासु रुचाउने गरिन्छ । त्यस्ता मासुबाट क्यान्सरको खतरा हुने चिकित्सकले बताएका छन् ।
मासु पोल्दा र सुख्खा हुने गरी भुट्दा प्रयोग हुने दाउरा र ग्यासबाट हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हुन्छ । त्यसले पेट र छालामा क्यान्सर हुन सक्ने बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका मेडिकल अङ्कोलोजी विभागका विशेषज्ञ चिकित्सक डा गुरुशरण साहले बताए ।
उहाँका अनुसार मासु पोल्दा मासुमा गुलियो पदार्थ र प्रोटिन हुने हुँदा बढी पाक्दा त्यसमा एक्रिल्यामिडिएस उत्पन्न हुन्छ, जुन क्यान्सरका लागि सहयोगी बन्छ । बढी पोलेको मासु प्रयोग गर्ने जापानीमा यो समस्या धेरै रहेको साहले बताए । सो विषयमा जापानमा थप अनुसन्धान पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।
युवावस्थाका यस्ता बिरामी बढी आउने गरेको अस्पतालका मेडिकल अङ्कोलोजी विभाग प्रमुख डा भोलाप्रसाद रौनियारको भनाइ छ । भुटेको र पोलेको मासुबाट ठूलो आन्द्राको क्यान्सर अरु बढी हुने गरेको बताइएको छ ।
पटक पटक पातलो दिसा, पेट काट्ने र कटक्क दुख्ने गरेमा परीक्षण गर्न पनि उनले सुझाव दिए । यस्ता खाले क्यान्सर भएका बिरामीका परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि परीक्षणको लागि उनको सुझाव छ ।
उहाँका अनुसार मासु पोल्दा छोपेर पोलेमा अरु बढी हानिकारक हुने गर्छ । दसैँका बेलामा मासु प्रयोग गर्दा राँगा, खसी, बोकाको भन्दा कुखुरा र माछाको मासु प्रयोग गर्न चिकित्सकले सुझाएका छन् । उनीहरुको भनाइमा ती मासु उमालेर खाएमा अरु बढी स्वास्थ्यवर्धक हुने गर्छ ।
सावधान ! पोलेको मासु खाँदा यसरी हुन्छ मानिसको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालीले दसैँमा बढी मासु खाने गर्छन् । मासुका विभिन्न परिकार बनाउने क्रममा धेरै पोलेको र भुटेको मासु रुचाउने गरिन्छ । त्यस्ता मासुबाट क्यान्सरको खतरा हुने चिकित्सकले बताएका छन् ।
मासु पोल्दा र सुख्खा हुने गरी भुट्दा प्रयोग हुने दाउरा र ग्यासबाट हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हुन्छ । त्यसले पेट र छालामा क्यान्सर हुन सक्ने बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल अङ्कोलोजी विभागका विशेषज्ञ चिकित्सक डा गुरुशरण साहले बताउनुभयो ।